Rejuvenate anya contour - Masks arụrụ n'ụlọ | Bezzia
Ihe mkpuchi iji mee ka ntule anya dị ọhụrụ
Susana godoy | 12/01/2022 12:00 | Mma
Ihe nlegharị anya anya bụ otu n'ime ebe kacha sie ike, n'ihi na akpụkpọ ahụ dị gịrịgịrị, ya mere ọ nwere ike ịta ahụhụ karịa ihu ndị ọzọ. Na mgbakwunye, dị ka anyị si mara, okirikiri gbara ọchịchịrị nwekwara ike ịpụta n'ihi ihe dị iche iche na-adaba na ndụ anyị, na-eme ka anya anyị na-agbaji. Ya mere, anyị ga-agbada na-arụ ọrụ iji mee ka ihe mkpuchi anya na-emegharị anya.
Ebe ọ bụ na site n'inweta nri emebere n'ụlọ anyị ga-enye anụ ahụ ihe niile ọ chọrọ n'ezie. A ezigbo hydration yana nzọ na vitamin E Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị bụ́ isi anyị na-aghaghị iburu n'uche. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ya n'ụdị nkpuchi iji mee ka ihu gị dị ọhụrụ, echefula ihe niile na-esote.
1 Akwa na-acha ọcha iji megharia nku anya anya
2 Nzọ na nkpuchi antioxidant
3 Agbagharala ube oyibo!
4 Yogọt dị ọcha
Akwa na-acha ọcha iji megharia nku anya anya
N'ikwu okwu banyere vitamin E, akwa ọcha nwere vitamin a n'ihi ya, anyị adịlarị na aka dị mma. Na-echefughị ​​na o nwere otu B, yabụ na ọ ga-echebe akpụkpọ anyị mgbe niile. Ya mere, anyị ga-etinye ya na mpaghara a ga-emeso ya, nke na nke a bụ anya anya. Anyị na-ahapụ ya ka ọ zuo ike ruo mgbe ọ ga-akpọnwụ n'ihi na nke a ọ ga-enyere anyị aka imechi akpụkpọ ahụ ka ọ dị anyị mkpa. Mgbe ahụ, ị ​​​​wepụ ya ma saa ihu gị nke ọma, na-etinye ude mmiri mgbe niile. Cheta na ị nwere ike ime ya kwa ụbọchị ka ị nwee ike ịhụ nsonaazụ kacha mma tupu oge eruo.
Nzọ na nkpuchi antioxidant
Anyị na-ekwu maka ya na ọ bụ na akpụkpọ ahụ chọrọ vitamin ahụ, ya mere, Ọ dịghị ihe dị ka ịkụ nzọ na ihe mkpuchi na-ebu nri ndị ahụ niile na-enye anyị ọgwụ antioxidants dị mkpa. Ọ bụ eziokwu na enwere ọtụtụ, mana na nke a, anyị ga-agwakọta karọt abụọ ma gwakọta ha na ihe ọṅụṅụ oroma na tablespoons abụọ nke mmanụ aṅụ. Mgbe anyị niile ngwakọta nke ọma homogeneous, ọ bụ oge itinye ya na akpụkpọ na na kpọmkwem ebe rejuvenate anya contour. Ugbu a ọ dị naanị ichere ihe dị ka nkeji iri na ise wee wepụ ya na nnukwu mmiri. N'ikpeazụ, ị gaghị echefu itinye ude mmiri na-amasị gị, iji mee ka nsonaazụ ya pụtakwuo.
Agbagharala ube oyibo!
Ma maka ịma mma na maka nri ọkacha mmasị anyị, ọ na-adị mgbe niile maka ọnụọgụ nri ọ nwere. Ya mere, ọzọkwa, ha achọghị ka ha hapụ imegharị anya ntugharị anya. N'okwu a anyị chọrọ ọkara ube oyibo nke na-eto nke ọma. Anyị ga-agwakọta ya na nkochi ime akwa na-agbakọta ya na mmanụ ole na ole nwere ike ịbụ mmanụ rosehip, ebe ọ bụ na a na-eji ya eme ihe na aghụghọ ndị a. Mgbe anyị nwere ngwakọta nke ọma, anyị ga-etinye ya na mpaghara a ga-agwọ ya, chere nkeji ole na ole ma wepụ ya ọzọ na mmiri. Obi abụọ adịghị ya, akpụkpọ ahụ ga-anakọta vitamin na hydration niile nke ihe ndị a na-enye ya.
Yogọt dị ọcha
N'ikwu okwu sara mbara, anyị nwere ike ikwu nke ahụ yogọt eke na-enyere aka ikpochapụ wrinkles, na mgbakwunye na-enyekwu ìhè akpụkpọ anụ na ọbụna ọgụ acne. Ya mere, ọ bụ otu n'ime ihe ndị na-emepụta kpakpando mana taa, anyị ga-ejikọta ya na tablespoon nke aloe vera. Ebe ọ bụ na hydration dịkwa na ihe a. Ha ga-ejikọta ọnụ na-eme ka akpụkpọ ahụ anyị dịkwuo mma, dị nro na nke siri ike. Ya mere, ị ga-etinye ya dị ka ihe mkpuchi, ị ga-echere ihe dị ka nkeji iri abụọ na ise wee wepụ ya na mmiri dị ka anyị na-eme na nke ọ bụla n'ime nzọụkwụ. Akpụkpọ ahụ gị ga-adị nro nke ukwuu, ma ọ bụrụ na ị na-emeghachi omume a ugboro abụọ n'izu wee zuru ike na-eji mperi kukumba ole na ole n'anya gị, ị ga-ahụ mmetụta ya ọbụna karịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Mma » Ihe mkpuchi iji mee ka ntule anya dị ọhụrụ
Ị cheburu echiche ịtụgharị ihe omume ntụrụndụ gị ka ọ bụrụ azụmahịa?